Caafimaadka Eyga | January 2022
Category: Caafimaadka Eyga
Cilladaha Hidaha ee Eeyaha
Warqadani waa wax soo saarkii ugu horreeyay ee dadaal ee aan sameeyay oo ay igu kaliftay daah-furkii in shan-bilood jirkeenna reer Scottish Terrier uu ku dhacay cudurka nooca III von Willebrand’s Disease (vWD). Jiritaanka cilladan dhiig-baxa ee hidde-sideyaasha ah lama ogeyn illaa uu ka soo gaadhay dhiig bax aad u dhow oo dhimasho sabab la’aan ah. Daaweynta xigta ... Sii akhriso
Mararka qaarkood waxa ka muhiimsan xayawaanka xayawaanku waa maareynta xasaasiyadda xayawaanka fudud. Waa kuwan talooyin khabiir ah oo kaa caawin kara.
Maxaan Ka Naqaanaa Hip Dysplasia eeyaha
Cilmi-baaris ku saabsan maqaarka maqaarka dysplasia (CHD) ayaa soo jeedinaysa inay tahay cudur ka sii adag sidii markii hore loo malaynayay. Ma jiraan jawaabo fudud ama xalka dhibaatada.
Cudurka Kelyaha ee Carruurta
Bishii Janaayo ee 1990, waxaan hoos u dhigay eey yar oo bil-iyo-bil jir ah oo la yiraahdo Standard Poodle. Waxay ahayd mid ka mid ah seddex Ey oo ku jira daasad kow iyo toban ah oo u dhinta Cudurka Yaryar ee Yar. Dhamaan seddexdii eeyo ee cudurka lahaa waxay u muuqdeen kuwa caafimaad qaba oo si caadi ah u koray ilaa calaamadaha caafimaad ay ka soo muuqdeen tobankii bilood hal, iyo labaatan bilood ... Sii akhri
Tilmaamaha ugu dambeeya ee lagu daweeyo Vaginitis-ka eeyaha
Vaginitis-ka eeyaha waxay u baahan tahay daryeel gaar ah, waxaanan haysannaa wax kasta oo aad u baahan tahay, laga bilaabo talooyinka illaa daaweynta guriga oo hubin doonta in ilmahaaga dhogorta leh uu ku sii jiro caafimaadka ugu fiican.
Ku calaamadee Cudurada ku dhaca Boorka eeyaha
Babesiosis Maxay Tahay: Babesiosis waa cudur hemoprotozoan (dhiig) shil kudhalatay. Noolaha waxaa loo yaqaan Babesia, cudurka waxaa loo yaqaan Babesiosis. Noocyada: Babesia canis, Babesia gibsoni Primary Vector: Brown Dog Tick (waa inuu quudiyo ugu yaraan 2-3 maalmood si uu u gudbiyo) Vectors kale: Deer Tick, dhiig lagu shubo, cirbado wasakhaysan, iyo qalab, transplacental. Cilad-sheegista: Waxaa jira laba ... Sii akhri
Dhibaatooyinka maqaarka eeyaha
Maqaarka eeygu wuxuu ku tiirsan yahay timaha iyo saliidaha saaran si uu xaaladdiisa ugu ilaaliyo.
Kahor Akhrinta Dheeraad ah: Kahor intaadan tarmin qashinkaaga, fadlan la tasho dhakhtar xoolaha. Macluumaadka ku jira Su'aalahan Su'aalaha la Weydiinayo waa in aan sinnaba loogu macneeyn karin bedelka daryeelka caafimaadka xoolaha iyo talo. Dheeraad ah, waa inaad ku dadaashaa inaad hesho dhakhtar xoolaha ah oo aqoon u leh arrimaha xiiqda canine. Sababtoo ah dad badan ayaa mas'uul ka ah ... Sii akhriso
pomeranian timaha dheer ee chihuahua isku darka
Magacyada shaybaarada jaalaha ah ee dheddigga
shaybaadhka madow vs dahab sooceliya
Adhijir Jarmal ah oo dhiig buuxa leh
Bulldog faransiis ah iyo isku dhafka Boston Terrier
waa goorma shiishu ka buuxdo